Ny fanoloran-tenantsika ho an'ny NCS Sheffield - Society Society
Ny fanoloran-tenantsika ho an'ny NCS Sheffield
FANAMPIM-PANAZAVA NY NOSY SHEFFIELD
Ny tanjontsika dia ny hikaroka programa mifangaro ara-tsosialy izay sady tsy azo antoka ho an'ny tanora rehetra.
Miezaka mafy izahay mba haka ireo tanora izay manana filàna isan-karazany ary izany dia atao amin'ny tranga iray noho ny antony. Raha misy tanora na ray aman-dreny nanambara ny filàna ara-dokotera / fanohanana amin'ny fampiharana azy ireo, dia hifanakalo hevitra izahay mba hahazoana fampahalalana bebe kokoa sy hiasa miaraka amin'ireo antoko rehetra voakasika amin'ny vahaolana tsara indrindra.
Manolo-tena izahay hiantohana ny fiarovana ny mpandray anjara, ny mpiasa, ny mpiasa an-tsitrapo ary ny mpiara-miasa mandritra ny fandaharana. Miara-miasa amin'ny mpiara-miasa manana traikefa be dia be izahay, mampiasa mpiasa manana traikefa ary mifanaraka amin'ny lalàna rehetra. Ilaintsika ihany koa ny mpandray anjara hanaraka fitsipika tsotra.
Mpivady manana traikefa matihanina
Ny programa NCS dia atolotra miaraka amin'ny fanohanan'ny vondrona fikambanana izay manana traikefa manan-danja amin'ny fiaraha-miasa amin'ny tanora. Miasa miaraka amin'ny fanohanan'ny vaomiera sy sekoly eo an-toerana isika.
Mandritra ny fihetsiketsehana rehetra, ny tanora dia miaraka amin'ny mpampianatra na mpitsabo mahay, ary ny mpiasa farafahakeliny ho an'ny tanora dia ho 1: 7. Ny asa aman-draharaha ivelan'ny toeram-piompiana rehetra dia tarihin'ny mpampianatra mahay. Ny ekipa tsirairay dia tarihin'ny mpanolo-tena iray tsy tapaka ho an'ny ankamaroan'ny fandaharana. Ny mpiasa rehetra dia voafidy tsara, mifatotra sy voaofana amin'ny asa rehetra ataony. Ny olon-drehetra ampiasain'ny Elements dia takiana amin'ny fanaraha-maso ny DBS (fantatra taloha amin'ny CRB).
Fankatoavana ny lalàna rehetra ilaina
Manaraka tanteraka ny lalàna manan-danja isika ary, raha mety, ny mpiara-miasa amin'ny mpiara-misakafo an-kalamanjana dia mahazo alalana ao ambanin'ny Lalàna mifehy ny lisansa 2004. Izahay (na ny mpiara-miasa) dia mamoaka tomban'ezaka amin'ny ankapobeny ho an'ny hetsika rehetra. Ny mpiasa rehetra dia ampiofanina mba hamantatra, hanaiky ary hanamaivana ny mety hitranga mandritra ny fandaharana.
Ireo andraikitry ny mpandray anjara
Ny NCS dia mitaky fanamby sy manosika ny tenanao. Manantena ny fanoloran-tena, ny fanoloran-tena ary ny hafanam-po. Ny mpandray anjara dia tompon'andraikitra amin'ny fanarahana ny fitsipi-pitondran-tena tsotra mandritra ny fandaharana. Raha misy mpandray anjara na tsia dia nanapaka ity fitsipi-pitondran-tena ity, dia mila mangataka azy ireo isika handao ny fandaharana. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy miverina mody ilay tovolahy.
Code of Conduct an'ny mpandray anjara
1. Araho ny fitsipika momba ny fiarovana sy ny lalàna
2. Mialà fotsiny amin'ilay tranonkala amin'ny Mentor
3. Tsy mandeha any amin'ny efitrano na efitrano hafa
4. Aoka ho ao amin'ny efitranonao aorian'ny 10.45pm
5. Tsy misy alikaola, fanafody tsy manara-dalàna na penknives
6. Hajao ny olon-kafa